Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii maamulka jaaliyadda Norway oo lagu qabtay Magaalada Oslo.
Shirkii maamulka jaaliyadda Norway oo lagu qabtay Magaalada Oslo.
Oslo-12-08-2012- Waxaa caawa fiidkii kulan heer sare ah lagu soo gaba-gabeeyey magaaladdaOslo ee xarunta u ah wadankaNorway, shirkii xubnaha Jaaliyadda S. Ogadeenya oo bishii hal mar la qabto.
Shirkan oo ku soo beegmay bisha Ramadaan ee Barakaysan ayaa lagu furay Aayado quraanka kariimka ah oo uu akhriyey Sheekh Abdiwali Garaad, intaas kadib xubnaha ayaa loo qeybshay xubnaha Ajendihii shirka. Waxana war-bixin kooban oo taabaynaysay wax-qabadka Jaaliyadd ee bisha June iyo July oo iswata, qaab cilmiyeysan u soo jeediyey Gudoomiyaha Jaaliyadda Mudane Abdirahman Sheikh Yusuf, oo intaas kadib micra-foonka ku soo dhaweeyey hoggaanka Arimaha Ururka ee Jaaliyadda Norway, Mudane Abdishakuur, oo goobta ka soo jeediyey hawlaha kala duwan ee Jaaliyaddu ku talaabsatay labadii bilood ee tagay iyo hawlaha la filayo in la qabto bilaha soo socda.
Shirkan oo lagu falan-qeeyey qodobo badan oo taabanayey wax-qabadka iyo horu-marinta Jaaliyadda S. Ogadenia ee dalka Norway, ayey isku raaceen dhamaan xubnihii ku sugnaa shirkii caawa sidii loo dardar-gelin lahaa hawsha islamarkaasna looga midho dhalin lahaa sida ugu dhakhsaha badan talaabooyinka lagu gaadhayo dhamaan qodobadda shirka la isula soo qaaday. Waxana sidoo kale hoosta laga xariiqay in la dardar-geliyo hawlaha Jaaliyadda u yaala.
Sidoo kale, shirka ayaa ugu baaqay bulshadda Caalamka sidii ay u joojin lahaayeen xasuuqa ba’an ee ka socda Ogadeenya, gargaar iyo bad-baadana loola soo gaadhi lahaa dadka kumanaanka ah ee ay barakicinayaan maalin walba maleeshiyaadka woyaanaha iyo daba-dhilifkooda islamarkaasna cadaaladda loo soo taagi lahaa dambiilayaasha gumaadka ka geysanaya dhulka Ogadenia.
Shirkan ayaa xubanaha waxaa kala qeyb-galay Hogaanka Arimaha ururka ee Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenia, Xaaji Maxamed Yusuf oo ka soo jeediyey khudbad kooban oo uu xubanaha ku booriyey inay sii xoojiyaan dadaaladad aan kala go’a lahayn ee lagu baadi-goobayo xorriyada iyo madax-banaanida dhulka Ogadenia ee ku hoos jira gumeysiga Itoobiya. Sidoo kale, Hogaanka ayaa la wadaagay xubniihii kasoo qeyb galay shirka wax-bixinadii ugu dambeeyey ee gudaha Ogadenia iyo dadaaladda Diblomaasiyadeed ka socda dalka dibadiisa.
Waxana si farxad iyo guul ku dheehan tahay kusoo gaba-gaboobayey shirkii JaaliyaddaNorway, oo gundhig looga dhigay wax-qabad laba-jibaaran iyo hawl-karnimo dheeraad ah si loo xaqiijiyo himilooyinka ay higsanayaan Shacabka Ogadenia ee ah Xorriyada. Waxaana Alle uga baryeen Shacabka Ogadenia inuu ka dul-qaado gumeysiga daashaday, una soo dadadjiyo xornimadda ay sugayaan Shacabka Ogadenia.